Bal qiyaas xaaladdaasi. Waad sugaya wicitaan oo taleefan ah. Waxaad double-hubiyaa aad iPhone si loo hubiyo ringer uu saaran yahay. Marka ay siddo, aad ayaa la filayaa in ay u maqlaan. Daqiiqado ka dib, aad ogaato in aad ilowday in wac muhiim ah. Mararka qaarkood aad iPhone ringer bilaabo shaqo gaba. Marka ay tani dhacdo, badhamada aad carrab la 'ma sii shaqeyn doonaa. Gudoomiyaha External waa mid ka mid ah sababaha aad telefoonka ka haysato, kuwaas oo arrimo audio. Waxay leedahay afhayeenka gudaha iyo gudoomiyaha dibadda. Dabcan haddii aad dhibaato, aad doonaysid in aad ka maqnaan calls qaar ka mid ah. Inta badan, waxaa laga yaabaa in aad u malaynayso in tani ay tahay dhibaato weyn oo ku dhamaatay sugayaan qof kale si loo eego dhibaatada.
Waxaa jira had iyo jeer waa xal dhibaatadan. Waxay ku xiran tahay in ama aan arrinta waa hardware ama software la xiriira, arrintan ayaa loo hagaajin karaa. Laakiin aynu rajaynaynaa in ay software tan waa dhibaato fudud si uu u xaliyo.
Hubi haddii Aamusi waa On
First of dhan, meesha looga saaro dhibaatooyinka fudud ka hor inta aanad quusin in kuwa ka adag. Hubi in aad layma aad iPhone ama waa hilmaameen dib. Si aad u ogaato, waxaa jira laba siyaabood:
• Dhinaca aad iPhone, hubi biiro carrabka la'aa. Waa in la demiyo. Tilmaame ayaa haddii la gagadin waa line orange ku biiro ah.
• Hubi Settings app oo ka jaftaa Dhawaaqyada. The slider Ringer iyo Alerts ma jidka oo dhan, bidixdaan tegayaa. Si kor u qaadaysaa codka, guuraan slider in ay xaq u si.
Hubi haddii aad Guddoomiyaha Works
Qeybta hoose ee aad iPhone, hoose ee loo isticmaalo wax kasta oo codadka telefoonka aad. Haddii aad la ciyaareyso kulan, muusiko dhegayso, daawado filimada ama ma ka maqli ringtone ah wacay aad, wax walba waa dhan oo ku saabsan gudoomiyaha. Haddii aadan maqli calls, aad gudoomiyaha laga yaabaa jabay. Haddii ay arrintu sidaa tahay, muusig ama YouTube video si ay u hubiso mugga. Haddii audio ay wanaagsan tahay, in ahan dhibaatada. Haddii dhawaaqa ma ka soo bixi, laakiin aad heshay mugga ilaa cod weyn, aad u baahan tahay si ay u cusboonaysiiyaan aad iPhone ee gudoomiyaha.
Hubi haddii dhawaaqi mid ahaa Four
Haddii hal qof idiinka yeedhana, laakiin ma laha calaamado wicitaanka, aad suurto gal hor istaagay tiradooda. Apple siiyey macruufka 7 isticmaala awood u leh inay xiri tirada, fariimaha qoraalka ah iyo FaceTime ka lambarada telefoonka. Si aad u aragto haddii tirada ayaa weli ku xayiran on telefoonka: Tubada Settings, Phone, iyo Four. On shaashadda, waxaad ka arki kartaa liiska lambarada telefoonka aad mar hor istaagay. Si tubada, tuubada Edit geeska kore ee midig, ka dibna ku taabtay goobada cas, ka dibna badhanka tubada.
Haddii aan weli la xalin, hubi ringtone. Haddii aad qabto ringtone caado, ringtone ee laga yaabo in ay is kharribeen ama la tirtiro waxay keeni kartaa telefoonka ma aha in giraan mar kasta oo qof uu ugu yeeray. Si wax looga qabto dhibaatooyinka ay la ringtones, isku day in aad kuwan.
• Si aad u dhigay a default ringtone cusub, Settings ka jaftaa, Dhawaaqyada, iyo Ringtone. Marka sameeyo, dooran ringtone cusub.
• Si aad u hubiso haddii qofka, kuwaas oo isugu yeedhayso maqan yahay, Phone tuubada, Xiriirada, oo la helo magaca qofka iyo tuubada. Marka sameeyo, ka jaftaa edit ah. Hubi line iyo yeelaan ringtone cusub. Haddii ohyahay gaar ah waa dhibaatada, ay helaan dhammaan xiriirrada xilsaaray dooro mid cusub.
Haddii ay jiraan Dayaxa, waxay ka dhigan tahay calls block aad
Moon taagan tahay hab Ha ku dhibin, oo ku noqon karaan sababta aad telefoon aan la soo wacayo. In shaashadda sare midig, waxa dami. Habka ugu fudud ee ay tan u sameeyaan waa kabacdi upfrom hoose si ay u muujiyaan Center.In Control shaashadda guriga, waxan u samaynaysaan waa fudud oo degdeg badan. In laga daadiyo, kabacdi iyo jiidaya walax tan muuqan doonaa.
iPhone soo dajiya calls si toos ah u horay looduubay oo uusan wac ma
Haddii aad hadda soo food saartay dhibaato noocan ahi, inta kale xaqiijiyay in iPhone ma aha cillad. Saas ma aha, ma dhibayo waxaa gagadin in ay u diraan dhammaan soo wacitaanada farriinta codka ah, dhibaatadan waxaa loogu hortegi ka dhawaaqi mid ku baaqay in dib daqiiqo gudahood. In macruufka 7 iyo 8 macruufka, kuwaas oo versions caadiga ah ee software iPhone, si kama noqon kartaa hab Ha ku dhibin marka aad bedesho goobaha.
Ring / Switch Silent
Xaaladaha intooda badan, waxaa laga yaabaa in aad iska indho ama ha iska aamusin / giraanta ku biiro ayaa lagu wadaa inuu quieten ringer ah. Ogow in biiro tani waa ka baxsan mugga biiro caadi ah. Haddii aad aragto qaar ka mid ah orange ku biiro, waxay ka dhigan tahay in la qarka u saaran inuu gariiro. Si taas loo xaliyo, bedesho waxa ay si wac oo aad wax walba u wanaagsanaan doonaan.
Kor u qaadaysaa codka
Hubi si aad u hubiso badhamada mugga aad iPhone sababtoo ah waxay xakameeyo ringer ah. Saxaafadda "Volume Up" button ka screen Home ah, iyo in la hubiyo mugga ayaa lagu wadaa in heerka ku haboon.
Isku day Warbixannada ah
Xaaladaha intooda badan, waxaad u baahan tahay in ay dib iPhone si sax ah mar kale shaqeeyaan. Waxan samee by haysta oo riixaya "Home" iyo badhamada "Power" si isku mar ah shan ilbiriqsi. Ka dib marka aad qaban badhannada, telefoonka waa la xiray. Marka sameeyo, awood ku yaal oo ku siin ringer isku day kale.
Phones ku xayiran yihiin in "Sameecadaha Mode" waa mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee la iPhone users qaba arrimaha ringer.
Xira dekedda beddel
Xira dekedda ku jira taararka in wafdi codadka aad iPhone. Haddii aad haatan haysato arrimaha ringer, waxaad u baahan tahay in laguugu beddelo isku xira dekedda. Haddii lahaanshaha 4s iPhone iyo iPhone 4, hubi Hanuuniyaa iyo bedelo isku xira dekedda ah. Geedi socodka qaadan doonaa oo kaliya in ku dhow soddon daqiiqo, oo naso loo hubiyo in aadan ku kici doona badan.
Arrimaha Sound iyo ringer waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee aad arki doontaa 4s iPhone iyo dhibaatooyin la mid ah dhowr iPhone 4. users Qaar ka mid ah soo maray, waayadan dambe. Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan waa xaqiiqda ah in uu si fudud loo xallin karaa iyadoo la Hanuuniyaa dayactir midig.
> Resource > iPhone > Sida lagu Helo iPhone Ringer Dhibaatooyinka go'an